Wasiirka Maaliyadda Oo Faahfaahin Ka Bixiyay Miisaaniyad Sanadeedka 2018-ka | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Maaliyadda Oo Faahfaahin Ka Bixiyay Miisaaniyad Sanadeedka 2018-ka
Published on January 30, 2018 by sdwo · No Comments
Hargaysa (SDWO): Wasiirka wasaarada maaliyadda Somaliland Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa sheegay in misaaniyadda sanadka 2018 ka ay ku salays naan doonto xaga horumarka.
Yuusuf Maxamed Cabdi oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in misaaniyadda sanadka 2018 ay ka duwanaan doonto misaaniyadihii hore eek u salaysnaan jiray kharash iyo dakhli.
Waxaanu hoosta ka xariiqay in misaaniyada sanadkan ay xooga saari doonaan waxbarashada beeraha caafimaadka biyaha kaluunka iyo kaabayaasha dhaqaalaha.
Yuusuf Maxamed Cabdi oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Waxaanu ku hawlanahay oo aanu wadnaa diyaarintii misaaniyadda 2018 ka oo qaabka loo dajinayaa uu ka duwanaan doono misaaniyadihii hore misaaniyadanina waxa ay ku salaysnaan doontaa xaga horumarka.
Halka misaaniyadihii hore ay ahaan jireen kharash iyo dakhli oo ay ku bixijireen hawl socod siinta hawl maalmeedka dawlada”.
“Waxaanu doonaynaa in misaaniyadan aanu dhino kharashka oo aanu ku badalno horumar waxaana misaaniyadan xooga saaraynaa amniga beeraha biyaha xoolaha nool kaluunka macdanta iyo tamarta iyo isgaadhsiinta.
Waxa kale oo aanu xooga saaraynaa kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid tahay in dib loo bilaabo wadada Ceerigaabo intii ka hadhsanad waxa kale oo aanu ahmiyada saari doonaa arimaha bulshada caafimaadka iyo waxbarashada”ayuu yidhi wasiirku.
Sidoo kale Wasiirku waxa uu sheegay in ay ku soo kordhiyeen wasaarada maaliyadda labo waaxood oo muhiima.waxaanu yidhi “wasaarada maaliyadda intii aanu joognay waxa aanu ku soo kordhinay labo waaxood oo kala ah waaxda horumarinta shaqaalaha iyo cilmi baadhista iyo waaxda arimaha shuruucda waa xahaas oo muhiima oo qayb ka ah dib u habaynta shaqaalaha”.